20 Hondo Munamato Pfungwa Matanho Ekuporesa Varwere | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 20 Hondo Munamato Pfungwa Matanho Ekuporesa Varwere
38 kuti Mwari akazodza sei Jesu weNazareta neMweya Mutsvene uye nesimba: uyo akafamba zvakanaka, achiporesa vese vakadzvanywa nadhiabhori; nekuti Mwari waiva naye.
Jesu achiri mubhizinesi rekuporesa kurwara nhasi. Ndiye mumwe chete zuro, nhasi uye nekusingaperi. VaHebheru 13: 8. Isu tinoshumira Mwari asingachinje, kana akazviita nezuro, achazviita nanhasi nekusingaperi. Ini ndakanyatso nyora makumi maviri emunamato ehondo mapoinzi ekurapa chirwere. Minamato iyi minamato yehondo nekuti kurwara kudzvinyirira dhiabhori. Dhiabhori ndiye arch anodzvinyirira ari seri kwese kweurwere nezvirwere, ndosaka tichifanira kumudzingira kunze nesimba muzita raJesu.
Kurwara hausi mugove wako semwana waMwari, Jesu pachake akabvisa hurwere hwako hwese, nemavanga Ake iwe wakaporeswa, hurwere mutorwa mumuviri wako, saka uzvirambe. Usatapure hurwere mumuviri wako, tsiura muzita raJesu, usamira ipapo, ramba uchizvitsiura kusvikira dzanyangarika zvachose kubva mumuviri wako. Ndine mashoko akanaka kwauri nhasi, paunenge uchiisa munamato yehondo yekurapa kurwara pamusoro pehupenyu hwako kana newemudiwa, iwe uchagovana uchapupu hwekupora ipapo muzita raJesu.
Mwari akaita zvigadziriso pakurapa kwedu kubva kumagwaro, asi isu tinofanirwa kuzvigamuchira nekutenda, pasina kutenda, hatigone kugamuchira chero chinhu kubva kuna Mwari. (Mat. 9:29, Vaheb. 11: 1-6). Unofanira kutenda kuti Mwari vanokwanisa kukuporesa kubva kuhurwere hwese uye hurwere. Mwari haamanikidze chero chinhu pane chero munhu, haazomanikidze kuporeswa pauri kana iwe ukasatenda. Kutenda ndiyo mari inotenga kurapwa kwedu kubva kuna Mwari. Kutenda ndiko kuwedzerwa kwemaoko edu kuti ugamuchire zvishamiso zvedu kuna Mwari. Kusvika pakutenda kwako kuri munzvimbo, kupora kwako hakuonekwi. Naizvozvo, ndinokurudzira kuti uite minamato iyi mukati kutenda nhasi uye iwe uchave nezvipupuriro zvako.
Ini handina basa nezvingave zvakaonekwa navanachiremba, tenda Mwari nesainzi yekurapa, ingotenda mune zvinotaurwa neshoko raMwari, kunyangwe hazvo chirwere mumuviri wako chiri chekupedzisira, iwe uchaporeswa ipapo paunenge uchiita iyi minamato yehondo. Iyi minamato yehondo yekurapa kurwara inopedza zvachose kurwara mumuviri wako kwehupenyu muzita raJesu. Mwari vakukomborere.
1. Baba, ndinokurumbidzai nekuda kwesimba renyu rine simba rinokwanisa kuporesa zvese hurwere.
2. Baba ndinokutendai nekuti ndimi Jehovha Rapha Murapi wangu.
3. Rega Simba rako rekuporesa rizorore pahupenyu hwangu ikozvino, muzita raJesu.
4. Rega ruoko rwako rwechishamiso ruve rwakatambanudzwa pane hupenyu hwangu izvozvi, muzita raJesu.
5. Ruoko rwako rwekununura rwakatambanudzwa pane hupenyu hwangu ikozvino, muzita raJesu.
6. Ndinoparadza simba remweya werufu pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
7. Ini ndinotsiura utiziro hwese hwekurwara, muzita raJesu.
8. Ini ndinoparadza kubatwa kwehurwere nezvirwere pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.
9. Ndinokuraira chirwere (taura zita kana mazita), pfugama kuzita raJesu, uye ubude kunze kwemuviri wangu, muzita raJesu.
10. Ini ndinoramba kutaura chirwere zvachose, muzita raJesu.
11. Ini ndinoraira kubviswa kwakazara kwechirwere chero chipi zvacho muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
12. Handichaonazve chirwere ichi muzita raJesu.
13. Rega dutu remhepo riparadzire chero chombo chine hutera chakanangana nehupenyu hwangu, muzita raJesu.
14. Wese mweya unodzivisa kupora kwangu zvakakwana, wira pasi ufe izvozvi, muzita raJesu.
15. Vavaki vese verufu ngavatange kuzviuraya, muzita raJesu.
16. Rega hutachiona hwese hwehutachiona mumuviri wangu vife, muzita raJesu.
17. Rega wese mushandi wechirwere anoshanda achipokana nehutano hwangu anyangarika, muzita raJesu.
18. Tsime rekusagadzikana muhupenyu hwangu, woma izvozvi, nemuzita raJesu.
19. Nhengo yega yega yakafa mumuviri wangu, gamuchira hupenyu izvozvi, muzita raJesu.
20.Ropa rangu ngarisungwe neropa raJesu kuita hutano hwangu hwakakwana, muzita raJesu.
Ndatenda baba, nekuti ndapora muzita raJesu. Ameni.
Previous nyaya100 Minamato Yekunamata Kwemashura Kusimuka
inotevera30 minamato Yokurwisa Vavengi vePamberi
Melusi ncube January 14, 2020 pana 3: 44 pm
Thank u man of God.I am a pastor but ndakarwiswa neBlood pressure abs diabetes. Vanoda minamato yako. Ndinokutendai neminamato mapoinzi
Adikini Florence February 25, 2020 pana 7: 50 pm
Ini ndiri Florence here asi ini ndine kurwadziwa kwemuviri kupisa ganda uye chigunwe kusviba ndinoda minamato yako
Salome March 31, 2020 pana 5: 13 am
Kurwadziwa mudumbu rangu rakadzika iro doi enda ndapota ndinamatei
Francis SMGbeinda April 25, 2020 pana 12: 47 am
Ndatenda Mufundisi neminamato inonakidza yemunamato. Ndanga ndichirwara ne angina moyo desease, chirwere cheshuga, kukwira kweropa / hypertension, uye kusanyanya kushanda.
Ndokumbirawo mundinamatire ini nemhuri yangu ruregerero rwaMwari nekupodzwa KWAKE kwakatevera.
Ndatenda Jesu nekundiporesa. Ameni.
Kimberly Henderson August 17, 2020 pana 4: 54 pm
Ndinokutendai Mufundisi Chinedum, dai simba uye chiedza chedu vakatendeka, vanokudzwa uye vanoshamisa Ishe Mwari, vane simba munzira dzese, varambe vachikuchengetai sezvakaziviswa muna15vaKorinde. 57: 58-4 yakatsiga, isingazungunuswi uye ichigara ichiwanda mubasa raIshe, sezvo muchiziva kuti basa renyu harisi pasina muna Ishe. Nekuti Akapa… vamwe vafundisi… kuitira kushongedzwa kwevatsvene pabasa rehushumiri… kuvaka muviri waKristu, kusvikira isu VESE (kusimbiswa kuwedzerwa) kuhumwe hwerutendo neruzivo rweMwanakomana waMwari… ( VaEfeso. 11: 13-XNUMX). Ndatenda nekusungwa kwekutenda mukutenda! Ini ndichabatanidza masimba emagetsi muminamato yangu yemazuva ese ndichisimbisa kukunda kwatakaita muZita raJesu! Ropafadzwa.
Jenelle Reyes January 21, 2021 pana 1: 06 am
Ndinotenda neshoko iri rine simba kubva kuna Mwari, nekuti dhiabhori ari kuedza kuisa muviri wangu kurwara. Ini ndinoti hutano hwangu muzita raJesu. Amen ndinopora, maita basa Jesu
Mosesi February 22, 2021 pana 8: 13 pm
Yakakura yakafuridzirwa uye spirt yakazadza minyengetero. Makomborero munhu waMwari ishe.
Ayemoba samson March 2, 2021 pana 12: 24 pm
Ndatenda mufundisi ndaisa kutenda kwangu kumunamato uyu uye nekiyi yawo pakupora zvachose.
Ndiri kutambura nehutachiona hwechimbuzi uye staphylococcus eurus (staph) kwemakore matanhatu ikozvino.ndokumbira mundinamatirewo zvakawanda.ndatenda changamire
Audrey April 13, 2021 pana 11: 13 am
Kungoverenga nzvimbo dzekunamatira ini ndakaporeswa nehuremu huri kumashure kwemusoro wangu. Kurema kwaenda. Iye anorapa nekukurumidza. Ndinotenda matambudziko angu ese apera. Ndatenda Jesu. Ndichiri kupupura. Ndiri kunzwa chimwe chinhu chiri kufamba mudumbu rangu repazasi. Chivabvu changu ngachivhurike izvozvi muJN AAAAAAAMEN jehovah Rapha
Ozioma Onyebuchi May 28, 2021 pana 12: 42 pm
Ndinokutendai mufundisi nekuda kweminamato iyi, ndinoziva kuti zvaporeswa kuburikidza nemunamato uyu, Mwari akuropafadzei nekuburitsa nguva yenyu yekubatsira vamwe
Dineo Alice Moekoa June 17, 2021 pana 10: 09 pm
Ndinokutendai Mufundisi nekuda kwemunamato uyu, ndanga ndichirwara neAnemia uye chirwere chinoshungurudza ura asi NDINOZIVA KUTI NDAPORESWA NEMAZWI AJESU KRISTU.
Kunamata Kunongedzera Kupesana neNguva Inoparadza mweya
Minamato Pamusoro peKusarasika Murume Mukurota
PSALM 18 KUSHINGA VANOTI VESE